Kusviriswa naTariro kuShow yaJah Prayzah muToilet – Makuhwa.co.zw
Tariro akandisvirisa kuShow yaJah Prayzah muToilet. Handizive kuti dzaive nyere here kuwanda but musi uyu Tariro was acting funny kunge akadhakwa kunge arikuda mboro handina kuziva kuti chii. PaDance floor aipushira magaro ake pamboro yangu zvekuti i was surprised because she is not my girlfriend.
Here is some background, ini ndoshanda naTariro and we do catering saka vese vanoita maShows ava vanotora isu. Musi uyu taive muChegutu paShow ya Jah Prayzah and tapedza basa ndakaona Tariro auya kwandiri akati handei tinotamba. Hakasi kekutanga kutamba tese saka hapana changa chakaipa ipapo. Asi pandakaona achiisa garo rese pandiri ndakaziva kuti something was wrong.
Ndakaremember kuti ndambomuona achipopota paPhone pake but handina kubvunza hangu ndakaramba ndakabata garo rake iye achitamba chete. Akanyura mumaArms mangu and aive necomfort inenge 2 in 1 chairo. Ndakabata zamu ndikaona no complains ndikati ndapinda machena. Anga akapfeka kaJean kaive tight pamuviri wese and ndakauya nepaButton and ndokuisa ruoko mukati ndikaona munhu arikutouya padhuze neni.
Mboro yanga yamira zvehondo Masasi, saka ndakati rega ndimboenda kuToilet to cool off. Ndakaona Tariro achinditevera and i thought kuti pamwe achandimirira panze. Asi akapinda neni and ndokundipushira mukati. Takapinda mustall mune chamber and akatanga kundikisser ndakaziva kuti aida mboro ndikati mboro handinyime munhu. Ndainzwa vamwe varume vachitaura mutoilet umu apa ndiri busy kuda kusvira Tariro. Akandikisser akati “hatina nguva chingondisvira tiende” Ndakati haina hora ndokumubatisa chamber ini ndichibvisa jean riya. Ndakamusvira nekumashure and ndakaona munhu achiratidza kufarira mboro. Sevanhu vaimhanya ndakarova zveFast kusvika ndamutundira mukati. Akatora matissue ndokupukuta achibva apfeka jean rake. Akanditarisa achisekerera ndokuti “THANKS”
Up to now anoramba kuti ndimusvire futi i don’t know why. Saka apa i feel used but ndakamurongera and ndichamubata nayo chete…
Related Topics:Kusviriswa naTariro kuShow yaJah Prayzah muToilet